Ithebhulethi entsha ye-Acer, i-Iconia A500 Tab sele inexabiso kwi-Best Buy | I-Androidsis
Ithebhulethi entsha ye-Acer, i-Iconia A500 Tab, sele inexabiso kwi-Best Buy
Incopho | | Izaziso, Ezinye izixhobo, Amacwecwe e-Android
Kubonakala ngathi umenzi weTaiwan Acer akafuni kuhlala ngaphandle kokudlala kwibhodi yangoku yemidlalo yeetafile (yintoni isohlwayo endize naso!) Kwaye yiyo loo nto isungula I-Acer Iconia A500 Tab.
Ukususela ngale ntsasa yangoLwesihlanu, umhla we-9 ku-Epreli I-Acer Iconia A500 Tab iyafumaneka ngoku kwi Eyona ndawo ithengiweyo yokuthenga ngokubhukisha kwakho, ngexabiso leedola ezingama-450 (zilingana ne- 327 euromalunga nezinga langoku). Kwaye iya kufumaneka ukuthengwa ukusukela nge-24 ka-Epreli.
Eli cwecwe liza kuza nefayile ye- Inkqubo yokusebenza ye-Android ingu-3.0 (Inyosi yobusi). Kwintliziyo yayo iya kuthwala iprosesa enamandla ye I-Nvidia, Tegra 250 engundoqo ezimbini ze-1 Ghz. Ngaphandle kokuba 1 Gigabyte ye RAM.
Ngokweempawu zayo zemizobo, ziyachukumisa. A Iscreen se-intshi eyi-10,1, ukuhambisa a Isisombululo se-pixel esingu-1280 × 800 (Kule meko ilingana ne-Motorola Xoom, kwaye iphucula i-iPad2). Iyakwazi ukuvelisa kwakhona Ividiyo ye-HD 720p Kwisikrini, okanye sebenzisa izibuko Iziphumo ze-HDMI ukujonga iividiyo kwimiboniso yangaphandle). Ikhamera engemva 5 Megapixels kwaye, ukongeza kwiifoto, iya kurekhoda ividiyo, ngelixa ikhamera yangaphambili, 2 Megapixels izakuvumela inkomfa yevidiyo okanye incoko yevidiyo.
Okwangoku ukugcinwa kwangaphakathi kuya kuba yi-16 GB, nangona i-Acer iceba ukukhupha ingxelo ene-32 GB kwixa elizayo.
Ngokunjalo, okwangoku, baya kukhupha ingxelo kunye WiFi kuphela. Ngokunokwenzeka, kwixa elizayo baya kuzisa ingxelo kunye ne-4G yomsebenzisi we-North America i-AT & T (okwangoku ngamahemuhemu kuphela).
Njengoko i-Motorola Xoom yenzayo, i-Iconia A500 Tab izakuxhasa iFlash, kodwa ayizukuhamba kwintengiso kunye nayo efakiweyo, kodwa iya kufumaneka kwiNtengiso ye-Android kuhlobo lwayo lweBeta lweHoneycomb ye-Android 3.0.
Kwimarike enzima yamacwecwe, kuya kufuneka ijongane ne-Motorola Xoom kunye ne-iPad2, eya kuthi ikhuphisane nayo ngeyona asethi yayo ngexabiso. Ngokubhekisele kwi-Samsung Galaxy Tab 10,1 intshi, kunye neempawu ezifanayo ne-Motorola Xoom (le ine-32 GB yokugcina) kunye ne-Acer Iconia A500 Tab, ayinayo umhla wokukhutshwa, kwaye onke amarhe abonisa ukuba isekhona kuyakuthatha ixesha ukurhweba. Iba njalo ukhetho oluhle kuye nabani na okhangela ithebhulethi enexabiso eliphantsi kunye nenamandla kunye ne-Android Honeycomb 3.0.
Kuya kufuneka sibone ukuba iBlackBerry RIM Playbook ephuma ngo-Epreli 19 kulo mdlalo wamacwecwe angathini. Okwangoku, ukubanakho ukubhukisha kwi-Best Buy sele ilinge lokuzibeka kwimarike ngaphambi kwe-Playbook kwaye ngakumbi i-Galaxy 10,1 expected.
Masithembe ukuba abazukutsalwa! (Uxolo, i-pun ibingenakuphikiswa).
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » Ithebhulethi entsha ye-Acer, i-Iconia A500 Tab, sele inexabiso kwi-Best Buy
Izimvo ezi-36, shiya ezakho
Ngaba ungahlela amaxwebhu amagama? * - *
Ewe kunjalo, kule mihla phantse kuyo nayiphi na ifowuni ye-Android kunokwenzeka ukuba uhlele amaxwebhu ngefomathi yegama, ipowerpoint, njl. Ndifumana i-aesthetics kunye neempawu zeli cwecwe linomtsalane, ndiza kuyithathela ingqalelo kodwa besele ndinetafile, kumnandi ekuqaleni ukuncokola ekhitshini, kwigumbi lokulala njlnjl, kodwa ingxaki iza xa ndifuna ukwenza izicelo ezinzima okanye Imidlalo yevidiyo ndicinga nzulu malunga nepc touch enye ukuba kukho umntu onengcebiso 🙂
Kulungile, hayi kuphela kwi-Android nakwisimboli nayo, ndine-nokia eneempawu kwaye ndiyakwazi ukuhlela igama njl. kunye nepc yokubamba kuba jonga ngentsimbi ene-W7.
NGOKU NDINAKHO UKWENZA IIFOMU ZE-OFISI KWIThebhile?
Ndine-Acer Iconia A500 Tab kwaye ndingathanda ukushiya ukuthandabuza ukuba kuyeza okanye ukuba kuya kufuneka ufake iofisi.
Kude kube namhlanje akukho cwecwe line-ofisi kodwa ukuba ubona iifayile zokukhuphela igama njlnjl kodwa ungaziguquli
Ndine-Acer Iconia A500 Tab endifuna ukuyazi ukuba inayo okanye sele ifakwe iofisi, enkosi.
Molo, ndinayo i-acer iconia a500 kwaye iza noXwebhu, kodwa inguqulelo yasimahla onokuvula ngayo kodwa ungawahleleli amaxwebhu eofisi, into ekufuneka uyenzile kukujonga amaXwebhu okuya kuKhiye ngokuPheleleyo ukuze enze igcwele kwaye iyakwazi ukwenza nokuhlela amaxwebhu
Ulufumana phi olu xwebhu ukuze uye kwinkqubo ephambili engundoqo?
Molo, ndinecwecwe kodwa ndifuna ukwazi ukuba yatrai ares okanye kufuneka ndiyikhuphele okanye inkqubo kukukhuphela umculo kwaye ndizise inkqubo yasimahla ye-intanethi
yenzayo 9 iminyaka
Ndizisile, ndiye ndazisa, ndizisile, ukuba ndiye ndazisa… Yhini naca !!! Bringeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ungangcolisi kwaye awazi ukwahlulahlula amagama kunye neempazamo ezininzi. Ndiyazibuza… yintoni le isihogo unayo ithebhulethi yakho!? Ahhh ndilibele ... Ukweba umculo okanye iividiyo zeares. I-naco ayisokuze isuswe!
Ndinetafile ye-iconia kodwa andikwazi ukuncokola ku-facebook, kufuneka ndenze ntoni?
Ngelishwa akukho cwecwe lizisa eso sicelo ngokwenyani kungcono sincokole kwiselfowuni ndisebenzisa i-xperia x 10 kwaye isebenza ngokugqibeleleyo inyani ithebhulethi ayikho enye into ngaphandle kweselfowuni enkulu
K uyothusa xk ndikwanetafile yokwenza i-A500 kwaye ukuba ndiyakwazi ukuncokola ku-facebook
Molo, ndinetafile ye-acer 500 kodwa andikwazi ukufaka ikhamera ku-facebook okanye endaweni yengxoxo yevidiyo andikayisebenzisi.
Ndinetafile ye-iconia e-500 ... kwaye ndifuna ukwazi ukuba ndingazithenga na izixhobo ze-3G ... Oko kukuthi, faka ifowuni sim
Ndine-acer A500 | A501 (4G) ithebhulethi kwaye ndizamile ukuvula ifayile yePDF kwaye andinakuyivula, indixelela ukuba uhlobo lwefayile luyonakalisa okanye aluhambelani kwaye sele ndikhuphele iAdobe, sele ndibhalisile kwi-adobe.com. ukukwazi ukubhalisa ithebhulethi yam kwaye ke andinakukwazi ukufunda nayiphi na iPDF okanye ukusebenzisa amaXwebhu ukuya komnye umntu angandixelela ukuba ndingayisombulula njani loo nkcukacha enkosi
Ndingabususa njani ubomvu okanye ilitha emehlweni am xa ndithatha iifoto ngethebhu
Umntu othile uyazi ukuba kutheni iividiyo ezikwi-intanethi zingenakugqitywa kwi-iconia a500 (malunga nemizuzu emi-2 okanye emi-3 yevidiyo-ekwi-intanethi ebonwayo) edityaniswe kwi-ya.com VOIP wifi router kwaye endaweni yoko isebenza ngokugqibeleleyo kwenye yevodafone.
(Ndizamile lo mgca u-Ya.com ngee-pc's kunye ne-ipad kwaye ezi zixhobo aziniki ngxaki).
Ndinetafile yokwenza i-500. Ingxaki endinayo yile ilandelayo! Ndine-USB enolwazi, iincwadi, amanqaku, njl. Kwaye ndifuna ukubadlulisa kwitafile enye kukho indlela. Manyathelo mani ekufuneka ndiwalandele. Enkosi
Imigaqo 90 sitsho
Ndivule iakhawunti yeGoogle drive, ulayisha idatha oyifunayo emva koko uyikhuphele kwithebhulethi, ndiyisombulule ngolu hlobo
Uya cuevana apho ?? Cuevana.tv
Ndithenge enye kwaye isikrini asiqali, sinika kuphela i-ADROID Kwaye ayikho enye into endixelela ngayo ukuba kufuneka ndenzeni ukuqala ..
Ndingayibeka njani imodem ye-usb kwi-iconia as500?
Ndingamkhuphela phi umqhubi we-android yemodem ye-usb hspa k3770 usb stick ye-iconia as500 yam?
U-Lupe P. sitsho
ndingayisusa njani eluhlaza kwi-camaro andikwazi ukuthatha iifoto kunye nethebhulethi yam
Phendula uLupe P.
Ndingathanda ukubona ukuba ithebhulethi ingaba noxhumano lwe-intanethi ye-USB
Ukujonga i-intanethi naphi na apho ufuna khona ngonxibelelwano lwe-USB
NDINGENZA NJANI UKUSUSA ISIKHANGO SEPHIKO KWIZICELO ENDINGazisebenzisiyo
D Obama sitsho
Ndinetafile iscreen siqhekekile ukuba singalungiswa tshintsha iglasi apho bekufanele ndiyishiye khona ukuze ilungiswe
Phendula ku-D Obama
Molo, uyifumene iscreen? Yiyo eyaphukileyo yam kwaye andazi ukuba ndingayifumana phi, enkosi
Phendula ku Davi
UClaudia tacuabe sitsho
UClaudia ndinetafile malunga nayo kwaye ndingathanda ukwazi ukuba ndingamfumana njani umfundi oza kuthatha itafile yam endle andinayo inethiwekhi endle onokuthi uyibeke kwifowuni yam ukubona i-Facebook okanye i-nabegar nge-interne okanye ndinayo ukubeka idipozithi
Phendula uClaudia Tacuabe
Ixabiso lama-2597 sitsho
Nabani na onalo uluvo ndenza njani nge-acer iconia a500 tablet ndingena engxoxweni ye-facebook? Ndilayisha njani ifoto esuka 'kwi-webcam' apho? Enkosi.
Phendula kwiCaro 2597
Bamele ukuyenza ngexabiso eliphantsi ukuze ibe ntle kodwa bayinike njenge-350 dll
NDINETABLE ACER ICONIA 500A NDIFUNA UKWAZI UKUBA NDINOKUFAKA I-USB INTERNET MODE
yenzayo 8 iminyaka
Ndine acer iconia a500 ithebhulethi nje ukuba ndiyilungise kwimemori yenkunzi yegusha efakiweyo
yenzayo 7 iminyaka
Ndine-tblet acer iconia indixelela ukuba ndinayo i-wifi kodwa xa ndidibanisa ndifumana impazamo yokuqinisekisa, ngoba?
C # kunye .NET iilwimi ziza kwi-Android. Iprojekthi yeMono.
Umbala weNook unokuqhuba usetyenziso lwe-Android